तपाईलाई पैसाको हाहाकार भैरहेको छ ? पर्समा राख्न नबिर्सनुहोस् यी ७ बस्तु – Sandesh Press
November 13, 2021 159
वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा पैसाको अभाव नहोस् भन्नका लागि यसमा पनि सकारात्मक उर्जा पैदा गर्नुपर्छ । तपाइँले पर्समा राख्ने कुराले यसमा पैसाको प्रयाप्तता र अभावको वातावरण बन्ने पैदा हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । यहाँ वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा राख्नु पर्ने ७ कुराको चर्चा गरिएको छ । यी कुरा पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैनः
१, हरेक कुरा पर्समा राख्ने बानी छ भने यस्तो नगर्नुस् । पर्समा अनावश्यक चिजहरु गोलमाल गराए राख्दा यसले नकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ र आर्थिक अभाव हुन सक्छ ।
२, यदि तपाइँको पर्समा लक्ष्मीको तस्विर छ भने यसले पनि सकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ । यसले पैसाको अभाव हुन नदिने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ ।
३, पर्समा लक्ष्मीको प्रतिमा, गोमती चक्र, चाँदिको सिक्का राख्नु पनि शुभ मानिन्छ । यस्ता वस्तुले पर्समा सकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
४, मानिसहरुले कसै न कसैलाई गुरु मान्छन् । कतिपयलाई कुनै तर्थस्थलप्रति श्रद्धा हुन्छ । पर्समा गुरुको तस्विर हुनु वा अध्यात्मिक क्षेत्रको तस्विर हुनु सकारात्मक मानिन्छ । यसले तपाइँलाई आर्थिक अभाव हुन नदिने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
५, पर्समा लक्ष्मीलाई चढाइएको वा पुजामा प्रयोग गरिएको चावलका दाना राख्दा पनि सकारात्मक उर्जा बन्ने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । यस्तो चामललाई कागजमा पोको पारेर पर्समा राख्नु उचित हुने मानिन्छ ।
६, पर्समा अश्लिल तस्विर वा अश्लिल सामग्री नराख्नुस् । यस्ता कुराले नकारात्क उर्जा बढाउँछ । सके सम्म देवी देवताका तस्विर राख्नुस् ।
७, पैसाकी देवी लक्ष्मी हुन् । लक्ष्मीको कृपा भएमा पैसा हुने विश्वास गरिन्छ । यसका लागि पर्समा श्रीयन्त्र राख्नु राम्रो हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । विधी पुर्वक पुजिएको श्रीयन्त्र पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैन ।
Prevफुलन्देको आमा भावुक हुँदै मिडियामा , कमेडी क्लब बारे यसो भन्छन् ( भिडियो हेर्नुहोस् )
Nextफोटो छोई ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !ॐ लेखि सेयर गरौं!!! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ
भदौ ४ गते देखि १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा, सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न रोक
रुपा बहिनी र सरस्वती दिदीलाई यसपाली तिजमा सँगै छमछम नाच्नु पर्छ भने पछी (भिडियो हेर्नुस)
सासुको नि’धन भएपछि कि’रिया बसेकी पार्वतीको यसरि मृ’त्यु, केहि दिनमै जब रह’स्य खुल्यो गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो)
पशुपति क्षेत्रमा यी काम गर्न नपाइने, गरे कडा कारवाही हुने